Izixhobo zeGalufa Umzi mveliso we - China Izixhobo zeGalufa abavelisi kunye nabaxhasi
Xa ithetha ngokufumana izixhobo zegalufa, uza kumenzi ofanelekileyo kunye nesikhokelo apha, izinto ezincinci zentsimbi kwibala yegalufa zonke ziyafumaneka kwiwebhusayithi yethu, ngokwamava eminyaka emininzi, Izipho eziMnandi eziShwankathelayo zishwankathela ezona zidumileyo. Uyilo lwesixhobo se-divot yegalufa, umakishi webhola yegalufa, ithegi yemithwalo yegalufa, ikliphu yomnqwazi wegalufa, iklip yemali yegalufa kunye nokudlulisa uyilo oluninzi oluvulekileyo lwazo oluthi iindleko zokubumba zisimahla. Uyilo Elungiselelweyo bamkelwe kakhulu kuthi, qhagamshelana nathi apha kwaye siya kwenza nobuntu logo yakho ukuba abe obalaseleyo. Ukucaciswa: ● Izixhobo zegalufa: isixhobo segalufu, isiphawuli sebhola yegalufa, ithegi yemithwalo yegalufa, ikliphu yomnqwazi wegalufa, ikliphu yemali yegalufa, into nganye inoyilo oluvulekileyo oluthi lubize simahla. ● Izinto eziphathekayo, ubungakanani, umbala, ukutyabeka, ilogo, konke kufaneleka ukulandela imiyalelo ● Ukupakisha: 1pc / ibhegi eninzi, ibhegi yebhotile, ibhegi yevelvet, ingxowa ye-PVC, iseti enye yento epheleleyo kwibhokisi yesipho okanye ixhomekeke kwizicelo zabathengi.
Isixhobo esitsha soYilo segalufa
Ummakishi weBhola yeGalufa
Iiklipthi zeMali yeGalufa
Izixhobo zeGolf Divot